Akụkọ Akpado "Ahụike na Ọzụzụ" - ULLER
Ọ dị gị na ị gbaa ọsọ kemgbe ogologo oge mana n'agbanyeghị etu ị siri zụlite, ị na-eche na ọnọdụ ahụ gị adịghị aka mma? Ikekwe, ihe ị chọrọ bụ iji mejuputa usoro ị na-eme kwa ụbọchị: the Ọzụzụ Cross. Anyị na-agwa gị nkọwa niile gbasara usoro a iji nweta ike ma melite arụmọrụ gị.
You nụtụla banyere ya tupu mgbe ahụ Ọrịa Altitude? Ọ bụ aha mkparịta ụka na-anata akara ngosi nke mgbaàmà anyị na-ata ahụhụ ozugbo anyị malitere ọzụzụ karịa mita 2400 n'ịdị elu. Ihe dị mma bụ na anyị nwere ike izere ya ma ọ bụrụ na anyị akwadebe tupu oge ebugo ya montaña. N'isiokwu anyị taa, anyị na-akụziri gị ihe niile ịchọrọ ịma!
Nwere ike 05, 2021
Ọ dị gị ka ịgbachi obere olu ahụ n'isi gị, ebe ị na-achọ ịmecha usoro okirikiri gị, na ebe ọ bụla, ịchọrọ ịkwụsị, ọ dị gị ka ike gwụrụ gị na mberede na nkwesi ike ahụ malitere. Nke ọma, dịka o yiri ka ọ bụ anụ ahụ, bụ nke ọgụgụ isi. Anyị na-egosi gị ụfọdụ aghụghọ nke ndị egwuregwu na-ejikwa zụọ uche iji mechie olu ahụ, ka uche gị na ahụ gị wee nwee otu otu.
Ọ bụrụ na ị dị njikere ịnụ ụtọ egwuregwu egwuregwu na ụlọ, hapụ ka ebum n’uche gị fee, ma chịkwaa ahụ gị, wee gụọ ma chọpụta otu ọ ga-esi bụrụ ihe magburu onwe ya ịzụ ya n’ụlọ anyị yana Nnukwu Nduzi Anyị Maka Ọzụzụ N’ụlọ
Omume mgbatị ụlọ, nri na usoro ọzụzụ ịntanetị nke ga - enyere gị aka ime ka uche gị, ahụ gị na mmụọ gị sie ike! Planninghazi ọzụzụ anyị na ịhazi ya na nri anyị iji nweta nsonaazụ bara uru ma kwalite uche na ahụ anyị adịghị mfe ọrụ dịka o nwere ike iyi na mbido mbụ. Anyị na-enye gị echiche nke usoro ị ga - eme yana ozi bara uru mgbe ị na - ahazi nri tupu ị gaa nri.